Ungayithola kanjani ama-backlink esemgangathweni ebhizinisini labantu abadala?
Iwebhu lewebhu lihlukaniswe ngokuhluka kwayo. Okuqukethwe okubekiwe lapha kunganelisa noma yikuphi ukuthakazelisa nokuthanda. Noma kunjalo, ukumaketha kwe-intanethi kungaba nzima nakakhulu izikhathi ezingaba nzima ukukhuthaza izilaleli ezithile ezihlosiwe. Abanikazi bewebhu abakudala babhekana nokunamathela eminyakeni embalwa edlule ngenxa yemikhankaso yokukhangisa engakhethi. Ukugqugquzela imithombo yabantu abadala noma ukuphola kuwebhu kuwebhu kunzima kunamanye amabhizinisi njengoba abasebenzisi abaningi bekutholile ukuziphatha okubi. Noma kunjalo, lo msebenzi uhlala uqhubeka ngenxa yemikhankaso ehlukene yokumaketha kanye nezindlela zokwakha izixhumanisi. Ama-backlinks akudala webhusayithi angaba umthombo omkhulu wokuthola ithrafikhi omdala esayithini lakho, ngenkathi isebenzisa amasu amasha okuphromotha amhlophe kuphela.
Kungani umakethe omdala engaphansi kokuncintisana?
Abaningi bemakethe bazizwa benamahloni uma kuziwa kumawebhusayithi amakhulu akhuthaza. Yingakho le niche emakethe ibhekwa njengokuncintisana okungaphansi. Abaningi abathintekayo banciphisa ithuba lokuthola imali kule niche, okwenza kube nenzuzo kulabo abathengisi abanolwazi.
Ungase uzizwe uphazamisekile ngokuthuthukisa amagama omdala kuqala. Nokho, ngokushesha nje lapho uthola imali yokuqala, uzozizwa uhlukile. Kufanele uqaphele ukuthi kunabantu abaningi abajabulayo ukudala okuqukethwe kwalesi niche ngesisekelo sokuzimela. Ngokushesha nje lapho uqala ukuzizwa uqiniseka kule ndawo, uzothola imikhiqizo endala ayifani nokufaka imikhiqizo eminingi.
Empeleni, kunabasebenzisi abaningi abanesithakazelo kumkhakha omdala futhi bafuna ukuhleleka imikhiqizo noma amasevisi nge-intanethi. Yingakho kungeke kube kuhle ukuhlala kude nale ndawo.
Indlela yokudala iwebhusayithi yakho endala?
Uma udala iwebhusayithi enkulu, esikhundleni sokusebenzisa amandla we-backlink, isici esiyinhloko ukuhlinzeka ngokuqukethwe okucebile okuzoheha abasebenzisi kwisayithi lakho.
Ukuqukethwe kwevidiyo kanye nemidiya yezenhlalo kungaba nenzuzo kumikhiqizo yabantu abadala uma kwenziwa ngendlela efundisa. Isibonelo, ungakwazi ukushicilela okuthunyelwe kwansuku zonke noma ngeviki onke lapho uletha noma yimiphi imikhiqizo emisha noma olunye ulwazi olungajabulisa amakhasimende akho angakhona. Angikhuthazi ukuthi ngishicilele izithombe ezicacile noma amavidiyo njengoba azosuswa ekufinyeleleni okujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, usengozini ukuchitha idumela lakho njengomkhiqizo omdala osemthethweni.
Uma usanda kuqalisa ibhizinisi lakho kule niche, ngincoma ngokugxila ekudaleni iwebhusayithi enkulu, ehambisana nokuqukethwe, enomsebenzi omuhle. Kudingeka unikeze izivakashi zethu zesayithi ngengcezu yeseluleko ngale ndaba, kanye nezinye izincomo zephrojekthi.
Dala imikhakha eqinile kusayithi lakho ukusiza abasebenzisi kalula. Ungasebenzisa lezi zigaba ukuze uhlele lapho okuqukethwe okubhaliwe kuzofakwa khona.
Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukuhlinzeka abasebenzisi ngokusekela kwamakhasimende angu-24/7. Kubalulekile kumawebhusayithi omdala ngoba njengabasebenzisi abalawula bazizwa bengenalwazi kule ndawo futhi badinga usizo Source .